मन्त्री पण्डितलाई ठाडो प्रश्न : तस्करको क्विन्टल सुन पास हुने, कामदारको झिटी झाम्टो पास नहुने !
काठमाडौँ- अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित यूएईमा छन्। उनी दुबईमा आइतबारदेखि सुरु भएको सातौँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन ६ सदस्यीय टोलीसहित शुक्रबार राति यूएई पुगेका थिए।
यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले शनिबार गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीले झिटिगुन्टा आदेशको विषयमा आफ्ना गुनासोहरु राखेका थिए। तस्करहरुको क्विन्टलका-क्विन्टल सुन छिर्ने तर विदेश पसिना बगाएर नेपाल फर्केकाहरुको साना-साना समान किन नछिर्ने भन्दै पण्डित सामू सहभागीहरुले प्रश्न गरेका थिए।
यस विषयमा सरकारले लचकता अपनाउनु पर्ने धेरैको सुझाव थियो। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारमा भइरहेको कडाइ बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सहभागीहरुले पण्डितलाई आग्रह गरेका थिए।
सहभागीहरुले गरेको गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिँदै पण्डितले भने,”अहिले पुरानो ऐन मात्रै कार्यान्वयन गरिएकोले समस्या देखिएको छ, यस विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेछ”
अध्यागमनको सेटिङ हटाउन आफूले पुराना कर्मचारी हटाएर ६० प्रतिशत नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेको पण्डितको स्पष्टोक्ति छ। सरकारले सोचेजस्तो कम गर्न नसकेको स्वीकार्दै पण्डितले सुधारका प्रयास भइरहेको बताए। आजको भोलि नै ठूला परिवर्तन सम्भव नहुने बताउँदै पण्डितले नयाँ संरचनागत अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधान गरिने बताए।
यस्तै सहभागीहरुले पटक–पटक मानव तस्करीमा संलग्नहरुको सूची सरकारलाई बुझाउँदा समेत कानुनी कारवाही नभएको प्रति दुख समेत व्यक्त गरे।
प्रकाशित : आइतबार, माघ २७, २०७५११:०६
यति कार्पेटको गोदाममा भिषण आगलागी ! करोडौंको क्षति भएको अनुमान !